OKACC ဘက်ထရီစက်ရုံမှ OEM & ODM မှာယူမှုများကို ကြိုဆိုပါသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော Lithium-ion Battery ဖြေရှင်းချက်များနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများကို သင့်အား ပေးအပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။ OEM & ODM အတွက် အထူးမော်ဒယ်အမျိုးမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးပြု၍ info@okacc.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။
1. OEM ဆိုတာဘာလဲ။
OEM သည် Original Equipment Manufacturer ၏ အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်မှုအေဂျင်စီပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထုတ်လုပ်သူသည် ထုတ်ကုန်၏ အဓိကနည်းပညာကို ပိုင်ဆိုင်သော်လည်း ထုတ်ကုန်ကို တိုက်ရိုက်ဖန်တီးခြင်းမဟုတ်ပေ။ ၎င်းတို့သည် ထုတ်ကုန်၏ ဒီဇိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အရောင်းထိန်းချုပ်မှုတို့ကို တာဝန်ယူသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန် OKACC ဘက်ထရီစက်ရုံသို့ ပေးအပ်သည်။ ဤမုဒ်သည် အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းကြီး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ အလုံးစုံသော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
2. ODM ဆိုတာဘာလဲ။
ODM သည် မူရင်းဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူ၏ အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ အချို့သော ထုတ်လုပ်သူသည် အခြားလုပ်ငန်းများမှ စိတ်ကျေနပ်စေမည့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဤထုတ်ကုန်ကို အခြားကုမ္ပဏီ၏ အမှတ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် လိုဂိုဖြင့် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယခင်သည် နောက်ဆုံး၏ ODM ဖြစ်သည်။
3. OEM နှင့် ODM အကြား ကွာခြားချက်
OEM သည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် လုပ်ငန်းများအတွက် ၎င်းတို့၏ သီးခြားအမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ထုတ်ကုန်များ ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူသည် ထိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်လုပ်ငန်းအမည်ကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမည် သို့မဟုတ် အခြားလိုဂိုများဖြင့် ထုတ်လုပ်၍မရပါ။ ODM သည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လုပ်ငန်းများမှ ထုတ်ကုန်များ၏ မူပိုင်ခွင့်ကို သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းရှိမရှိအပေါ် မူတည်သည်၊ မဟုတ်ပါက ထုတ်လုပ်သူသည် ထုတ်လုပ်မှုကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် စီစဉ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
4. သင့်အတွက် ဘာ OKACC ဘက်ထရီစက်ရုံက လုပ်နိုင်သလဲ။
OKACC ဘက်ထရီစက်ရုံသည် ထုတ်ကုန်များနှင့် ပက်ကေ့ခ်ျများစွာတွင် စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်စက်ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဤထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်။ Lithium-ion Battery၊ LiFePo4 ဘက်ထရီ၊ Li-Polymer ဘက်ထရီ၊ Ni-MH ဘက်ထရီ၊ Ni-CD ဘက်ထရီ၊ သိုလှောင်မှုဘက်ထရီ၊ စက်ရုပ်ဘက်ထရီ၊ ဂေါက်တွန်းလှည်း ဘက်ထရီ၊ အလင်းရောင်ဘက်ထရီ၊ ဘက်ထရီအားသွင်းစက် စသဖြင့် ၎င်းတို့ကို သင့်လိုဂိုဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ပက်ကေ့ဂျ်အသစ် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းအတိုင်း။
1) Logo ပုံနှိပ်ခြင်း။
သင်ရွေးချယ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းတွင် သင့်လိုဂိုထည့်ရန် အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အထက်ဖော်ပြပါပုံတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး သင့်လိုဂိုအမှတ်တံဆိပ်ကို မည်သို့တံဆိပ်တပ်ရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ညွှန်ကြားနိုင်သည်၊ အော်ဒါမတင်မီနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီ သင့်ထံသို့ သက်သေဓာတ်ပုံကို ပေးပို့ပါမည်။ သင်၏လိုဂိုပုံသဏ္ဍာန်ကို နောက်ဆုံးတွင် သင်မကျေနပ်ပါက အဆင်သင့်ဟုထင်သည်အထိ သင်ဆန္ဒရှိသလောက် အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်ပါသည်။
a. အရောင် 1-4 ရောင်ရှိသော လိုဂိုတစ်ခုအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး အရိပ် သို့မဟုတ် အရောင်ခြယ်ခြင်းမရှိဘဲ ရိုးရာစခရင်ဖရင့်အတွက် သင့်လိုဂိုကို ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် တိကျစွာနှင့် လှပစွာ ရိုက်နှိပ်နိုင်ကြောင်း သေချာပါစေ။
b. လေဆာထွင်းထုခြင်းနှင့် သတ္တုထွင်းထုခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်းတစ်ခုလုံးကို ကွန်ပျူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့် သင်၏လိုဂိုကို ဤနည်းဖြင့် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် တိကျပြီး ကောင်းမွန်သော အပြီးသတ်မှုကို သေချာစေနိုင်ပါသည်။
2) Okacc ဘက်ထရီ ဒီဇိုင်း
OKACC ဘက်ထရီစက်ရုံသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ပေးဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ခိုင်မာပြီး စိတ်ကူးယဉ် ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ Lithium-ion ဘက်ထရီ အမျိုးအစားအားလုံးကို ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်စိတ်ကူး သို့မဟုတ် ဂရပ်ဖစ်များကို လက်ခံရရှိပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် အချိန်တိုအတွင်း အကောင်းဆုံး နမူနာပုံစံကို ထုတ်လုပ်ပေးပါမည်။ သင့်ဒီဇိုင်းကို info@okacc.com သို့ ယခုပေးပို့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများသည် သင့်ထံ မကြာမီ အကြောင်းပြန်ပါမည်။
OKACC တွင် အတွေ့အကြုံရှိသော အင်ဂျင်နီယာများ၊ ဒီဇိုင်နာများ၊ ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာများ၊ အရည်အသွေးအာမခံချက်၊ အရောင်းနှင့် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များအပြင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဖောက်သည်များကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းအားသာချက်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥရောပ၊ အမေရိကန်၊ မက္ကဆီကို၊ ဘရာဇီး၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများ အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း 50 ကျော်သို့ တင်ပို့ရောင်းချပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘက်ထရီများကို ဆိုလာစနစ်များ၊ UPS အရန်သိမ်းခြင်း၊ တယ်လီကွန်းတာဝါတိုင်များ၊ AGV၊ ဂေါက်လှည်း၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်များအတွက် အသုံးများပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် ထုတ်ကုန်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ၊ LED အကွက်များ၊ အိမ်တွင်းနှင့် အပြင်ဘက် အလင်းရောင် ပရောဂျက်များ စသည်တို့။